बुबाका साथी नेपाली शिक्षक
म चार/पाँच कक्षा पढदो हुँ । हाम्रो घरमा गुरु आएर बस्नु भो । बुबा शम्भुप्रसाद चापागाईं निजगढमा गौरीशंकर निमाविको प्रधानाध्यापक हुँदा सँगै काम गरेको शिक्षक । घरमा हामीलाई यसैगरी चिनाइएको थियो ।
खाइलाग्दो ज्यान, औसत नेपाली कदकाठीभन्दा ठूलो-अग्लो, हेर्दै रवाफिलो, कडा स्वभाव भएको, ठूल्ठूला आँखा, मिलेको नाक-नक्सा र अनुशासित व्यक्तित्व । यस्तै छवि बनेको थियो मेरो बाल मनस्थितिमा । अध्यापकका बारेमा अरु थप विवरण थाहा थिएन । तीन दिन बितेपछि बल्ल चाल पाएँ । उहाँ त हामी पढ्ने जनज्योति निमाविमा नेपाली पढाउने नयाँ शिक्षक पाे हुनुहुँदाे रहेछ । हाम्रो घरमा लगभग एक महिनाजति बस्नुभयो होला । कक्षागत हिसाबले हामी पढ्ने तहमा उहाँले पढाउनुहुन्न्थ्यो ।
अलिपछि थाहा भयो, गुरुको घर बनबहुवरी हो । पहाड घर सिन्धुलीको दुम्जा हो । कडा शिक्षकको छवि बन्न बेरै लागेन । अहिले त सामाजिक सञ्जालको विश्वव्यापी पहुॅंचमा रहेको चन्द्रपुर नगरको चेतनास्तर कस्तो छ, ठयाक्कै भन्न गाह्रो छ ।
आजभन्दा झण्डै चार दशकअघि हाम्रो गाउँको चेतनास्तर कस्तो थियो होला, अनुमान गर्न सकिन्छ । लैङ्गिक, धार्मिक, जातिगत, वर्ण एवं क्षेत्रगत विभेद र मानिसको दुर्वल पक्षका आधारमा गरिने विभेद तिनताक अति सामान्यजस्तो थियो ।
स्वाभाविक हो । बाख्रा गोठालो बाख्रासँग, भैँसी गोठालो भैँसीसँग र गाई गोठालो गाईसँग नै वर-पर उभिने हो । खड्का बाख्रा गोठालो जाॅंदा बाख्रासँग उभिएकै कारण कुनै परपीडक विद्यार्थीले उडायो । उनीहरूले खड्कालाई हेपेका थिए । उनलाई भनेका थिए, 'यो बाख्रीको पाेई हो ।'
निम्सरो चेतना, शिक्षाको कमी र समाजको लघु सोचका कारण यस्तो भएको थियो । उतिबेलाको सहपाठी काठमाडाैंका कृष्ण ठकुरी एउटा गोडा खोच्याउँथे । त्यसै कारण कैयन् केटाकेटी उनलाई 'लङ्गडाे' भनेर जिस्काउँथे, हेप्थे । त्यो हाम्रो चेतना र विभेदकारी सोचको त्यस बेलाको एउटा सूक्ष्म बिम्ब थियो ।
तिनताकको पात्र र प्रवृत्ति सम्झँदा सबैलाई उदेक लाग्दो हो । स्मृतिको गर्तमा डुबुल्की लगाउँदा एउटा घटना सम्झनारूपी भन्ज्याङमा थकाइ मार्दै गरेको भेटियो । चिडिया दहका (सामाजिक कारण नाम नलेखिएको)… खड्का हाम्रा सहपाठी थिए ।
उनले वनमा बाख्रा चराउन जाॅंदा कसैले बाख्रासँगै उभिएको देख्यो । स्वाभाविक हो । बाख्रा गोठालो बाख्रासँग, भैँसी गोठालो भैँसीसँग र गाई गोठालो गाईसँग नै वर-पर उभिने हो । खड्का बाख्रा गोठालो जाॅंदा बाख्रासँग उभिएकै कारण कुनै परपीडक विद्यार्थीले उडायो । उनीहरूले खड्कालाई हेपेका थिए । उनलाई भनेका थिए, 'यो बाख्रीको पाेई हो ।'
उनलाई परपीडक सहपाठीहरूबाट यति उडाइयो कि भनिसाध्य छैन । त्यो लज्जाका कारण सहपाठी खड्का विद्यालय आउनै छोडे । त्यो पनि श्रमप्रतिको चरम उपेक्षा, बलमिच्याइँ, उत्पीडन र लुलो चेतनास्तरलाई आलोकमा ल्याउने अर्को डरलाग्दो बिम्ब थियो । उतिबेला अरुको उछिताे काढेर, अरुलाई हेय व्यवहार गरेर र अरुलाई खिल्ली उडाउँदै आनन्द लिने नितान्त गलत प्रवृत्ति थियो । फलत: सहपाठी खड्का स्वयम्‌ले आफूलाई शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित गर्ने स्वनिर्णय गरेर विद्यालय आउनै छोडे । ती अचेल कहाॅं के गर्दै होलान् ? स्मृतिको सागरबाट अलप भएका साथीभाइको अक्षम्य व्यवहारकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित उतिबेलाका सहपाठी खड्कालाई अहिले सम्झँदा पनि मन अमिलो हुन्छ ।
हुन त संसारमा १० प्रतिशत मानिसको देब्रे हात दाहिनेको तुलनामा बढी चल्छ । दिमागको देब्रे भाग बढी चलायमान भएका कारण देब्रे हात बढी चलेको हो भन्ने वैज्ञानिकहरूको ठहर छ । त्यस्ता मानिसहरू गणितमा दक्ष र अब्बल हुने ठानिन्छ ।
यस्तैमा जनज्योति निमाविका विद्यार्थीले थाहा पाए- अपरिचित नेपाली शिक्षकको देब्रे हात दाहिनेको तुलनामा बढ़ी चल्छ । उटपट्याङमा रमाउने विद्यार्थीहरूले नाम राखिहाले- 'देब्रे सर ।' त्यसमा होमा हो मिलाउने यो अकिञ्चन पनि थियो । पारिवारिक सम्बन्धलाई समेत साथीभाइसँगको सम्बन्धका कारण उटपट्याङ बढ़ाउने सोच र व्यवहार गर्नु यो अकिञ्चनको पनि कमजोरी थियो । अथवा, बालापनको चञ्चल दिमागको उपज थियो । सायद अतिरिक्त क्रियाकलाप र मनोरञ्जनका वैकल्पिक स्रोतहरू उपलब्ध नभएकै कारण पनि हाम्रा छिमलका केटाकेटी त्यस्तो भएका थिए ।
हुन त संसारमा १० प्रतिशत मानिसको देब्रे हात दाहिनेको तुलनामा बढी चल्छ । दिमागको देब्रे भाग बढी चलायमान भएका कारण देब्रे हात बढी चलेको हो भन्ने वैज्ञानिकहरूको ठहर छ । त्यस्ता मानिसहरू गणितमा दक्ष र अब्बल हुने ठानिन्छ । जेहोस्, हाम्रा प्रिय आदरणीय गुरुको देब्रे हात चल्थ्यो ।
विद्यालयको पठनपाठन जारी थियो । म कक्षा कोठामै थिएँ । हामी सबै जर्‍याकजुरुक उठ्यौँ । शुभप्रभात गुरु भन्यौँ । गुरु हातमा हाजिरी पुस्तिका, चक-डस्टर र लट्ठी बोकेर छिर्नुभएको थियो । कालो पाटीमा बार, तिथि, विषय र आफ्नो नाम लेख्नुभो । मलाई त थाहा थियो । अरुले पनि थाहा पाए । नौलो नेपाली शिक्षकको नाम रामकुमार कोइराला । 'सर्वनाम, विशेषण, पेसा, जात, थर, दर्जा, क्रिया दीर्घ हुन्छ दीर्घ लेख्ने गर ।' नेपाली अध्यापकको पहिलो कक्षामा भएको नेपाली पढाइ र ह्रस्वदीर्घको ज्ञान मेरो दिमागमा जीवनपर्यन्त रहन गयो ।
यो सबाईबारे यो आलेख लेख्नुअघि अनुसन्धान गरेपछि चाल पाएँ- गुरुले कुनै समय काठमाडाैंको दरबार हाईस्कुलमा नेपाली अध्यापन गर्ने गोपाल पाँडे 'असीम'को पुस्तक (१९९७) ह्रस्व-दीर्घ आदिको सबाईबाट स्मरण गरेर हामीलाई त्यो श्लोक रटाउनुभएको थियो । गुरुको पढाउने शैली अन्य शिक्षक र शिक्षिकाकाे भन्दा पृथक र प्रभावकारी थियो । उहाँले विद्यार्थीलाई अदबमा राख्न जान्नुभएको थियो । दायाँ-बायाँ गर्ने, अल्छी गर्ने र गृहकार्य नगर्ने विद्यार्थीलाई देब्रे हातले गाला या ढाडमा चड्कन लाउनुहुन्थ्याे ।
तिनताक शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुटेर सजाय दिनु अति सामान्य ठानिन्थ्याे । चलनचल्तीको सजाय दिएकै कारण हाम्रा आदरणीय नेपाली गुरुलाई पृथक ढंगले हेर्ने पूर्वाग्रही विचार र सोच राख्ने कुरै भएन । उहाँले सिफारिस गर्नुभएको व्याकरण मध्यचन्द्रिका हामी सबै विद्यार्थीले पढ्यौँ र दैनिक अभ्यासमा पनि प्रयोग गर्‍याैँ । उहाँले व्याकरणको संज्ञा वा नाम पढ़ाउँदा हालेको कथा अहिले पनि कानमा गुञ्जन्छ ।
संज्ञा वा नाम बुढाका पाँच भाइ छोरा भन्दै कथाकै ढाँचामा ढालेर एउटा उत्कृष्ट कथा पढाएझैँ सुनाउनुहुन्थ्यो । पाँच किसिमको संज्ञालाई जेठोदेखि कान्छोसम्म वर्गीकरणमा हाल्नुहुन्थ्यो । व्याकरणजस्तो नीरस विषयलाई गुरुले रसिलो हुनेगरी पढाउनुहुनथ्यो । उहाँले विद्यार्थीलाई बुझ्न र सम्झन सजिलो हुनेगरी अर्थ्याउने र व्याख्या गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । अहिले फर्किएर हेर्दा लाग्छ- हाम्रो नेपाली भाषा र लेखन उम्दा नभए पनि निम्सरोचाहिँ छैन । हाम्रो स्थिति यस्तो रहनुमा नेपाली शिक्षकको अध्यापन र शैलीको ठूलो देन छ ।
गुरु बुबाको साथी । पारिवारिक सम्बन्धका कारण बेलाबखत हाम्रो घरमा आउजाउ गरिरहनुहुन्थ्यो । तर, अध्यापक रामकुमार कोइराला हाम्रो घर आउँदा मेरो सातो जान्थ्यो । आफूले चाल नपाएको ठूलै गल्ती पो गरेँ कि ! कुनै आपत आइलाग्ने पाे हो कि भन्ने भय भइरहन्थ्यो । पढाइमा निम्छरो र अल्छी विद्यार्थीको पहिचान जो बनेको थियो मेरो । मेरो अभिरुचि अतिरिक्त क्रियाकलाप र सामाजिक कुरामा बढी थियो । त्यस कारण गुरुको भयले सधैँ लखेटिरहन्थ्यो ।
त्यतिबेला सहपाठी हृदयाघातका कारण दिवंगत गोपाल श्रेष्ठले भन्यो, 'देब्रे आयो । कुटाइ खालास् ।' मैले पछाडि हेर्दै नहेरी भनेँ, 'मलाई कुट्यो भने म पनि देब्रेलाई ढुंगाले हानेर भाग्छु ।' ला अब बित्याँस पर्‍याे । अध्यापक हाम्रो छेउबाट साइकलमा बिस्तारै पेडल चलाएर जान लाग्नुभएको रहेछ ।
त्यसो त सम्झना गाढै छ । शिक्षक लामो समय दुर्गाचोकको उत्तरपट्टि काठको घर बनाएर बस्नुभएको थियो । अंशवण्डापछि उहाँको भाइ विनोदचन्द्र कोइरालाको भागमा परेको त्यो घर यो पंक्तिकारको घरभन्दा दुई घर उत्तरपट्टि थियो । त्यो घर केही वर्षअघि बेचिसकिएको थाहा पाएँ । धेरै पछि गुरु चन्द्रनिगाहपुरको बजारटोलमा अनन्त कोइराला र शान्तदास कार्की (दासबाबु) को घरछेउमा पक्की घर बनाएर सर्नुभयो । त्यसैले पनि होला, अध्यापकको ज्येष्ठ पुत्र मनोज काेइरालाबाहेक उसका अरु चार भाइसँग सघन सम्बन्ध बनाउन पाएको थिइनँ । त्यसैले भनिएको होला- आए गए माया मोह, नआए नगए को हो को हो ।'
यो प्रभातकालीन शैक्षिकसत्र चलेको बेलाको कुरा हो । उखरमाउलो गर्मीयामको प्रभातकालीन कक्षा सकेर हामी घर फर्कंदै थियाैँ । जतिबेला चकचक गर्दै म साथीसित घर फर्कंदै थिएँ । त्यतिबेला सहपाठी हृदयाघातका कारण दिवंगत गोपाल श्रेष्ठले भन्यो, 'देब्रे आयो । कुटाइ खालास् ।'
मैले पछाडि हेर्दै नहेरी भनेँ, 'मलाई कुट्यो भने म पनि देब्रेलाई ढुंगाले हानेर भाग्छु ।'
ला अब बित्याँस पर्‍याे । अध्यापक हाम्रो छेउबाट साइकलमा बिस्तारै पेडल चलाएर जान लाग्नुभएको रहेछ । मेरो मनले निधो गर्‍याे, 'मैले त्यसो भनेको शिक्षकले सुन्नुभयो ।' मुटुको धड्कन तीव्र भयो । मुख रातोपिरो भयो । एक प्रकारले पिसाब उम्कनेगरी सातो गयो ।
गुरुले केही कदम अगाडि साइकल बिस्तारै चलाएर हामीलाई केही सेकेण्ड पर्खनुभयो । त्यसपछि भन्नु भयो, 'ए ! प्रज्ज्वल, तँ मलाई भेट्न घरमा आइज है !'
मैले भनेको कुरा शिक्षकले सुन्नुभएको थियो भन्ने डरले म त्यसै पानीपानी थिएँ । मैले भने, 'हस् सर ! हुन्छ । म आऊँछु ।'
घर पुगेर खाना खाएँ । साबिकझैँ एक निद्रा सुतेँ । गर्मीमा तराईमा मजस्तै सबै सुत्छन् एक झपक । अचेल पनि सुत्छ्न्‌जस्तो लाग्छ । त्यसपछि नेपाली अध्यापकलाई भेट्न गएँ । उहाँ पनि एक झप्को सुतेर उठिसक्नुभएको रहेछ । बार्दलीमा हुनुहुन्थ्यो सर । बस् भन्नुभयो । छेउमा काठको मझ्यौला आकारको कुर्सी थियो । बसेँ । तर, डर र त्रास मनभरि थियो ।
शिक्षकले भन्नुभयो, 'तैँले के गरेर खाने विचार गरेको छस् ? पढाइमा अल्छी गर्छस् । तँ अल्छी तिघ्रो, स्वादे जिब्रो हुने भइस् । तेरो दिमाग राम्रो छ । तैँले पढाइमा धेरै राम्रो गर्न सक्छ्स् । तँ मेरो साथीको छोरो होस् । तेरी आमा विद्यादेवी चापागाईं पनि शिक्षिका हुनुहुन्छ । तँलाई बिग्रिने छुट छैन । नचाहिने संगत नगर । राम्रोसँग पढ् केटा ।'
हत्त न पत्त 'हस्' भनेँ । अपमानपूर्ण शब्द प्रयोग गरेकोमा कुटाइ खाइएला वा बुबाआमाको अगाडि निहुरी मुन्टी न हुनुपर्ने भाे भनेर भयातुर थिएँ । ग्लानि भइरहेको थियो अध्यापकलाई उहाँका पछाडि अपमानपूर्ण सम्बोधन गरेकोमा । सम्झाई बुझाई गरूञ्जेल टाउको निहुराएर मौन थिएँ । शिक्षकको अर्ती सकिएपछि पनि म चुप लागेर बसेँ । त्यसपछि भन्नुभयो, 'अब जा ।' नमस्कार गरेर बिदा मागेँ ।
विद्यालयबाट फर्कंदा आफूले शिक्षकका पछाडि 'देब्रे' भनेको कुरा एक मनले गुरुले सुन्नुभएको थियो कि भन्ने मेरो आशंका अहिले पनि मनमा छ । अर्को मनले ठान्यो- शिक्षक महान् हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले भेट गर्न बोलाएर पनि त्यो सन्दर्भ र प्रसंग नै उपकाउनु भएन भन्ठानेँ ।
उतिबेला उमेर, ऊर्जा र उन्नतिलाई उकेरा लगाउन नसक्ने, अल्छी गर्ने वा नजान्ने समाजको फुच्चे प्रतिनिधि थिएँ म । गुच्चा-डण्डिबियो खेल्नु, उटपट्याङ गर्नु, बागमती, नुनथर र वन घुम्न जानु, बेल, अमला, गुएँली, जमुना, कुसुम, असारे टिप्नु, आफ्नो उचाइ नपुगेकाले ठूलो मामाको (स्वर्गीय हरिप्रसाद पुडासैनी) रेले साइकल कैँची हानेर चलाउनु, पाँच जना अरु साथीभाइलाई पनि साइकल चलाउन सिक्न दिनु, साइकल चलाउँदा लड्नु, जीउको १० तिर घाउ-खत बनाउनु, भकुण्डो खेल्न १५ जना साथीभाइको टोलीसहित साइकलमा कहिले कुन गाउँ, कहिले कुन गाउँ जानु, यस्तै थिए हाम्रा दिनचर्या ।
तिनताकको चन्द्रनिगाहपुरमा हाम्रो पिँढीको हुर्काई धेरै प्राकृतिक थियो । हो, मानिसको जिन्दगीलाई उपभोक्तावादको पिछलग्गु बनाउन यान्त्रिक जीवनको पूर्वतयारी गर्नैपर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्त थियो त्यो समय । त्यसैले हाम्रो पिँढीले शिक्षालाई जीवनको लयमा होइन, जीवनको लयमा शिक्षालाई आत्मसात् गरेको थियो । हुन पनि केही वर्षअघिसम्म नेपाली समाज शिक्षा र आफ्ना सन्तानका बारेमा अत्यन्त संकीर्ण सोच र परिभाषामा जकडिएको थियो ।
उतिबेला भनिन्थ्यो- छोरी बिग्रे नर्स, छोरा बिग्रे कमर्स । थाहा छैन, अहिले नेपाली समाज यो लैङ्गिक विभेदसमेत भएको उखानबाट कति पर पुग्यो ? नेपाली समाजले शिक्षा, केटाकेटीको सिकाइ र जीवन वृतिलाई अचेल कसरी परिभाषित गर्छ ? त्यो पनि थाहा छैन । तर, उतिबेला एकाेहोरो पढनुपर्छ । लेख्नुपर्छ । खेल्नु हुँदैन । खेलकुद, गीत, संगीत र कलाक्षेत्रमा लाग्नु हुँदैन । जतिसुकै उमेर र कक्षाका विद्यार्थी हुन्, तिनको शैक्षिक ग्रहणशीलतालाई साकार पार्न सक्ने गरी उमेर, ऊर्जा र दिमाग तयार छ, छैन । तिनलाई विल्कुलै वास्ता गरिन्नथ्यो । विद्यार्थीको एक मात्र काम भनेको लेख्ने र पढने मात्र हो भन्ने संकीर्ण भाष्यमा शिक्षा र हुर्कंदो उमेरको केटाकेटीलाई बाँधिएको थियो ।
स्मृतिको सागरमा शनैशनै स्पष्ट दृश्यहरू झुल्किन्छन् । यसो सम्झन्छु । हाम्रो तात्कालिक परिवेशमा खर्क आले भकुण्डोको उम्दा खेलाडी थिए । हाम्रो भेगको पेलेजत्तिकै उसको क्रेज थियो । ऊ विद्यालयमा पढुञ्जेल उसको पढाइमा रुचि कम भए पनि भकुण्डो राम्रो खेल्छ भनेर कुनै पनि शिक्षकले प्रेरणा दिएको हामीले चाल पाएनौँ ।
त्यस्तै, अर्का साथी थिए चित्रबहादुर वाइबा । उनको हास्यब्यंग्य र क्यारिकेचरमा राम्रो रुचि थियो । उनमा हास्यब्यंग्य क्षेत्रमा नाम बनाउने विशाल सम्भावना देखिन्थ्यो । यदि उसले हास्यब्यंग्यक्षेत्रमा लगातार काम गर्ने अवसर पाएको भए ऊ आज राष्ट्रिय पहिचान भएको स्थापित कलाकार हुन्थ्यो । तर, उसलाई पढाइ कमजोर भए पनि तैँले हास्यब्यंग्य क्षेत्रमा केही गर्न सक्छस् भनेर कसैले पनि उसलाई उत्साहित बनाएको वा ऊर्जा थपेको हामीले कहिल्यै थाहा पाएनौँ ।
त्यस्तै, अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने नसाको शिकार भएर दिवंगत भइसकेका ध्रुव गुरुङ नृत्यमा यति अब्बल थिए कि कुरै नगरौँ । उनलाई कसैले उनको खुबी बुझेर प्रोत्साहित गरेको भए शायद उनी राष्ट्रियस्तरमा नृत्यगुरु वा नृत्य निर्देशकका रूपमा चिनिने क्षमता राख्थे । तर, उनलाई कहिल्यै प्रोत्साहित गरिएन ।
विगतमा खर्क आले, चित्रबहादुर वाइबा र दिवंगत ध्रुव गुरुङझैँ अतिरिक्त क्रियाकलापमा वर्तमानमा उम्दा ठहरिएका अहिलेकाे हुर्कंदो पिँढीले भविष्यमा के गर्ने ? त्यसको मार्गचित्रको निधो गर्न उनीहरूको जीवन हाल कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराले अवश्य सहयोग पुर्‍याउनेछ । त्यसबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै अहिलेको पिँढीले आफ्नो मार्गचित्र तय गर्न लागिपर्नु अपरिहार्य छ भन्ने लाग्छ ।
प्रवृत्तिगत रूपमा त्यो अचम्मको समय थियो । विद्यार्थीले लेखपढ मात्र गर्नुपर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग नलिए हुने भन्ठानिन्थ्यो । अतिरिक्त क्रियाकलापमा स्वस्फूर्त लागिपर्ने विद्यार्थीलाई 'बदमास' को पगरी गुथाइन्थ्यो । तर, बिडम्बना जिल्लाव्यापी वीरेन्द्रशिल्ड प्रतियोगिता हुँदा जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले खेलकुद, ललितकला, सांस्कृतिक कार्यक्रम र हाजिरीजवाफका सबै पुरस्कार जितेर लेराओस् भन्ने अपेक्षा हुन्थ्यो ।
सायद यस्तो हुनुमा तत्कालीन निरंकुश व्यवस्था पनि एउटा प्रमुख कारण थियो । अर्को कारण समय र बन्द समाजमा मानिसको जीवनको विहंगम सम्भावनाका ढोकाहरू बन्द थिए । खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका नजिक ठानिने मण्डलेहरू अगाडि थिए तर तिनमा बहुसंख्यकको पहिचान गुण्डा र बदमास मानिसको रूपमा थियो ।
दृष्टान्तका लागि निजगढमा मार्सल आर्ट्समा राम्रो गरेका केशव ठकुरी र सुब्बा ठकुरी खेलाडीसँगै गुण्डाको रूपमा बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा चिनिन्थे । त्यस कारण पनि के शिक्षक के विद्यार्थी के अभिभावक, सबै नै अतिरिक्त क्रियाकलापप्रति नकारात्मक सोच राख्थे । यस्तो सोच आमप्रवृत्तिको रूपमा मानिसमा गढेर रहेको थियो । त्यसैले पनि शिक्षा र केटाकेटीको हुर्काइलाई अत्यन्त सानो आयतनमा बुझ्ने-बुझाउने भाष्य र व्यवहार समाजमा व्याप्त थियो ।
तिनताकको पात्र प्रवृत्तिले सम्झना सागरको गहिराइमा डुबुल्की लगाउन बाध्य बनाउॅंछ । त्यतिबेला प्रवृत्तिगत रूपमा जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका केही शिक्षकहरू आफ्नो वैयक्तिक विचारसँग असहमतहरूलाई उछितो काढ्न सकेको बल गर्थे । एउटा दृष्टान्त यस्तो थियो- २०४५ सालको सरस्वती पूजाको अवसरमा सन्ध्याकालीन नाटक र सांस्कृतिक कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक पूर्ण तयारी पनि भइसकेको थियो । तर, पञ्चायती कालरात्रिका काला दिनहरू जारी राख्न चाहने जिल्ला प्रशासन प्रमुख (सीडीओ) लाई कार्यक्रमबारे कसैले जानकारी दियो । सो कार्यक्रममाथि प्रहरी लगाएर प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
गोप्य रूपमा त्यो कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउनैपर्ने स्तरको संकीर्ण व्यवहार कसले गरेको थियो । यकिन गर्नुपर्ने खोजको विषय हो । तर, त्यो हदसम्मको संकीर्णताको प्रदर्शन विद्यालयको ठ्याक्कै अगाडि घर भएको माध्यमिक तहको शिक्षिकाबाट भएको आशंका त्यतिबेला गरिएको थियो । त्यो प्रतिबन्धित कार्यक्रमका लागि यो पंक्तिकारले सम्झेसम्म स्वर्गीय शिव खड्का, दिलबहादुर खड्का, सीता कोइराला, सुमित्रा काफ्ले, गीता गुरागाईं, विनोद दाहाल, लोकबहादुर श्रेष्ठ, ध्रुव कोइराला, सरोज भट्टराई, कल्याण नेपाल, रामचन्द्र दाहाल, विनिता दाहाल, प्रभा बानियाँ, प्रभा श्रेष्ठ, ममता अधिकारी, किशोर श्रेष्ठ, दिलीप काेइराला, बालमुकुन्द कार्की र रमेश संग्रौलालगायतले कलाकार र नृत्यकारको रूपमा भूमिका निभाउने तयारी गरेका थिए । त्यसको रिहर्सलमा केही दिन संयोजनकारी भूमिका पूरा गरेर यो पंक्तिकार काठमाडाैं फर्केको थियो । यो सन्दर्भले सम्झाउॅंछ । जनज्योति माविमा शिक्षकहरूको व्यवहारमा आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति चरम रूपमा हावी थियो ।
त्यसो त भन्नै नपर्ला । प्रत्येक मानिसमा विशेष गुण हुन्छ । मानिसमा रहेका त्यस्ता विशेषतालाई पहिचान गरेर अघि बढाउॅंदा सम्बन्धित व्यक्तिले धेरै प्रगति गर्न सक्छ । हुन पनि समय क्रममा विद्यालयमा पढाइमा त्यति उम्दा नठानिएका विद्यार्थीहरू कल्याणी खड्का, सपुतबहादुर कार्की, राजन काफ्ले, राजन खड्का, खर्क आले, राकेश सिंह, नेपाल कार्की, भूषण पोख्रेल र ध्रुव कोइरालालगायत अन्यले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जीवनमा एउटा पित्को भए पनि योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । यो नामावलीको सिलसिला धेरै लामो हुन सक्छ । यो पंक्तिकारले बिर्सेको पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्था सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा रहेको खुबी र क्षमताका कारण सम्भव भएको थियो । जे होस, त्यतिबेलाको कुराबाट मानिसमा निहित विशेषतालाई बेलैमा उजागर गरी सोही क्षेत्रमा अघि बढाउन प्रेरित गर्नु शिक्षाक्षेत्रको विगतबाट गाढा सिकाइ हुन सक्छ ।
यो गर्मीयामको शैक्षिकसत्र जारी रहेको बेलाको कुरा हो । 'प्रज्ज्वल उठ !', शिक्षकले नेपाली विषयको प्रभातकालीन एउटा कक्षामा आदेश दिनुभयो । अल्छी शिष्यको पहिचानका कारण बिरालाकोटी यस्तो परिवन्दमा पर्थें म । तर, शिक्षक रामकुमार काेइरालाले यस्तो परिवन्दमा मलाई पटक-पटक पारिरहनुहुन्थ्यो । 'घनघस्याको उकालो काटदा' सुरुदेखl पढेर सुना', गुरुको थप आदेश थियो । त्यो पाठ झण्डै आधाजसो खरर पढेँ । सो पाठको मैले पढ्न बाँकी रहेका अनुक्षेदहरू कक्षाका अरु साथीले पढेर सकाएका थिए ।
यो १० कक्षा पढ्दाखेरिको कुरा थियो । कक्षा १० को महेन्द्रमालामा डा. ताना शर्माको यात्रा संस्मरण थियो- घनघस्याको उकालो काट्दा । त्यो यात्रा संस्मरणले मलाई भित्रैसम्म छोयो । औधी मन पर्‍याे ताना शर्माको लेखन, बान्की, विवरण, स्थानीयता र यात्रा अनुभव ।
विषयगतबाहेक अन्य पुस्तकहरू म पढ्थेँ । तर डा. शर्माको यात्रा संस्मरणले साहित्य र लेखनतिर लहस्याउने गरी छोयो । कक्षाको अन्त्यमा गुरुले सबैलाई त्यस्तै यात्रा अनुभव लेखेर ल्याउने गृहकार्य दिनुभयो । त्यस्तो लेख्नैपर्ने अभ्यास सोही पाठको अभ्यासगत पृष्ठमा थियो । तर, मलाई नै जोड़ दिएर अध्यापकले भन्नुभयो, 'प्रज्ज्वल, नबिर्सी है । भोलि तैँले लेखेको यात्रा संस्मरण यहाँ सुनाउनुपर्छ ।' पढ्न-लेख्न अल्छी गर्ने मलाई शिक्षकको निर्देशन काण्ड पुग्ने खालकाे थियो ।
पाठशालाबाट घर फर्कें । गर्मीयाममा लगभग 'लु' लाग्लाझैँ गरी तातो हावा बगेको थियो । गर्मीले दिउॅंसो कोही पनि केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए । रात पर्‍याे र वातावरणमा रहेको तातोपन हल्का कम भयो । हजुरबुबा घरैमा हुनुहुनथ्यो । लेख्न बसेँ । लेखन ३-४ अनुक्षेद भन्दा अगाडि बढ्नै सकेन । धेरै पटक प्रयास गरेँ । चित्त बुझ्नेगरी लेखन अगाडि बढ्नै सकेन । चार/पाँच पटक लेखेर च्यातेँ । धेरै छटपटी भयो । निद्रा लागेन । हजुरबुबा अमरराज चापागाईंले सोध्नुभयो, 'सानो बाबु, तँ किन छटपटिएको ?'
मैले हजुरबुबालाई आफ्नो समस्याकाे बेलीबिस्तार लाएँ । आफ्नो समयमा चार पास गरेर राणाको जागिर खानुभएको हजुरबुबाले पनि आवश्यक मार्गदर्शन गर्न सक्नु भएन । मेरो छटपटी र बेचैनी देखेर आमाले सोध्नुभयो, 'सानो बाबु के भो ? सुत्दैनस् ! सुत् ।'
मैले मेरो समस्या आमालाई पनि बताएँ । आमाले भन्नुभयो, 'तँ धेरैतिर घुमेको छस् । लेख् न । तँलाई मन परेको ठाउँ र यात्राको कुरा ।' फेरि सोध्नुभो, 'तँ काठमाडाैं जाँदा कहाँ गइस् ?' मैले सूर्य विनायक, बूढानीलकण्ठ, गोदावरी, बालाजुकाे बाइस धारा, स्वयम्भु, छाउनी संग्रहालय, वसन्तपुर संग्रहालय, वसन्तपुर डबली, नयाँ सडक, रत्नपार्क, रानी पोखरी, पाटन कृष्ण मन्दिर र भक्तपुर दरबारलगायतको नाम लिएँ । त्यसमाथि बुबाको भान्दाइ ध्रुव भट्टको घर धर्मस्थली गएको बताएँ आमालाई ।
आमाले फेरि सोध्नुभयो, 'धर्मस्थली जाँदाको सबै कुरा सम्झन्छस् ? सम्झन्छस् भने त्यही लेख ।'
मैले भनेँ, 'सम्झन्छु । नसम्झेको कुरा हजुरबुबालाई सोध्छु ।' आमा निदाउनुभयो । बुबा धेरै अघि निदाइसक्नुभएको थियो । सायद शिवबुटी कहिलेकाहीँ तान्ने बानीले बुबा छिट्टै निदाउनुभएको थियो ।
मेरो पेट बिग्रेर दिसाले च्याप्दा भैँसे, दामनहुँदै काठमाडाैं जाने बस दुई पटक रोक्न लगाएको सम्झन्छु । यसरी सुस्तसुस्त खुल्दै गए स्मृतिका पृष्ठहरू ।
सम्झनाका सयपत्री सरर फक्रिए । यो त्यतिबेलाको कुरा हो । मेरो ७ कक्षाको पढाइ सकेर ८ कक्षा सुरु हुनुअघि माइलो बुबा दीपकराज चापागाईं पूर्वतिर स्थलगत भ्रमण सकेर हाम्रो घर आउनुभएको थियो । उहाँले वन विज्ञानमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहसम्म पढ्नुभएको थियो । कहिले अस्ट्रेलियाली वन परियोजना, कहिले केर नेपाल, कहिले वन विभागको जिल्ला वन प्रमुख, कहिले न्यू एराको परामर्शदाता त कहिले संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न विभाग र निकायमा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्नुभएको थियो । उहाँ अमृत साइन्स क्याम्पसमा आईएस्सी पढ्दा चर्चित लेखक तथा पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सहपाठी हुनुहुन्थ्याे ।
उहाँले काठमाडाैं फर्कने बेलामा मलाई सोध्नुभयो, 'सानो बाबु, तँ काठमाडाैं घुम्न जान्छस् ?' मीनपचास (जाडो)काे बिदा थियो । म चुलबुले फुच्चेले नाइँ भन्ने कुरै आएन । दंगदास पर्दै र नाक फुलाउँदै हुन्छ भनिहालेँ । भ्रमण, घुमाइ, त्यसबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइबारे मेरो शिक्षिका आमाले राम्रैसँग बुझ्नुभएको थियो । आमाले तत्कालै सहमति जनाएका कारण मलाई त्यस्तो लागेको थियो । अनि माइलो बुबालाई भन्नुभएको थियो, 'माइलो बाबु ! भैहाल्छ नि ! जाडोभरि काठमाडाैं घुम्छ । सानोबाबुको कक्षा माघको दोस्रो-तेस्रो सातातिर सुरु हुन्छ । त्यति बेलासम्म चन्द्रनिगाहपुर पठाइदिनुपर्छ ।'
माइलो बुबाले सहमति जनाउनुभएको थियो । बुबा पनि तिनताक राजाको गाउँतिरै हुनुहुन्थ्यो । त्यसो त म आठ वर्षको हुँदा पनि काठमाडाैं केही महिना बसिसकेको थिएँ । तर, त्यो बसाइमा गणेश पुडासैनी दाजुले सालको पातमा भैँसीको मासुको परिकार कचिला ख्वाएको मात्र धमिलो सम्झना थियो । तिनताक कालीमाटीको आमा मिलन केन्द्रमा सिलाइ कटाइको तालिम लिन आमा आउनुभएको थियो । त्यसैले मेरो आमा-बुबा नै काठमाडाैंमै बस्नुहुन्थ्याे । त्यतिबेला बाइरोडको बाटोबाट पन्जाबीले चलाएको नेपाल पब्लिक मोटर सर्भिसको हरियो बसमा बुबासँग काठमाडाैं गएको सम्झन्छु । मेरो पेट बिग्रेर दिसाले च्याप्दा भैँसे, दामनहुँदै काठमाडाैं जाने बस दुई पटक रोक्न लगाएको सम्झन्छु । यसरी सुस्तसुस्त खुल्दै गए स्मृतिका पृष्ठहरू ।
यो आमाले मलाई काठमाडाैं जान अनुमति दिएको दोस्राे पटक थियो । माइलो बुबासँग एक बिहान जनकपुर-काठमाडाैं चल्ने दिवा सेवा साकम्बरी यातायात एक्सप्रेस बसमा चढेँ । त्यो बस नारायणघाट-मुग्लिनहुँदै काठमाडाैं जाने थियो । माइलो बुबाको फ्ल्याट बालाजुको बाईसधारानजिकै थियो । तराईमा हुर्केको केटोलाई काठमाडाैंको जाडोले राम्रैगरी सताएको थियो । केही दिनपछि बुबा हाम्रो पहाड घर धादिङकाे धुनिबेँसीबाट बालाजु आउनुभएको थियो । काठमाडाैं आएको दुई सातापछि बुबा र म बालाजु बाईपास, रानी वन, बोरेटार, अर्जेलटार (पछि धर्मस्थली) हिँडेर पुगेका थियाैँ ।
जाडो बिदामा भएका भट्ट भाइहरूसँग धर्मस्थलीमा खेतबारी, खोला, डाँडाकाँडा घुमेको थिएँ । भाइहरूसँग पानीअमला पनि खोजेर खाएको थिएँ । भट्ट भाइहरूसँग धर्मस्थलीको चप्पाचप्पा घुमेको थिएँ । काठमाडाैंको काँठ कस्तो छ भन्ने अलिअलि चाल पाउने भइसकेको थिएँ । माइलो बुबाको छोरा भाइ दिलीप चापागाईंसँग काठमाडाैं चक्रपथको हरियालीमा रमाउँदै सुनसान सडकमा साइकल चलाएको थिएँ । सडकमा त्यतिबेला सानो चिनियाली हाते ट्रयाक्टरहरू अलि-अलि देखिन्थे । ती ट्रयाक्टरहरू खेती किसानीमा जोत्न र सामान ओसार्न प्रयोग हुन्थे । त्यसबाहेक चक्रपथको सडक प्रायः सुनसान हुन्थ्यो । लेख्न थाल्नुअघि यी सबै प्रसंग र अनुभव मेरो दिमागमा चलचित्रको दृश्य घुमेझैँ एकपछि अर्को गर्दै आए ।
हो ! त्यही घुमाइलाई अलिकति साहित्यिक रङ दिने कोसिस गरें । नबुझेका र नसम्झिएका कुराहरू हजुरबुबालाई सोधेँ । एनकेन मैले यात्रा अनुभव लेखेर सकेँ । जे भने पनि अलिअलि घनघस्याको उकालो काट्दाको नक्कल पनि गरेँ । यति गर्न मलाई झण्डै ३ घण्टा लागेको थियो । रातको करिब १२ बजेको थियो होला । गृहकार्य सकेर ढुक्कसँग निदाएको थिएँ ।
भोलिपल्ट विद्यालय गएँ । अघिल्लो दिन भनेझैँ शिक्षकले कक्षामा पस्नेबित्तिक्कै मलाई उठाउनुभएको थियो । र, भन्नुभएको थियो, 'प्रज्ज्वल तैँले लेखेको पढेर सुना ।' मैले खरर पढेर सुनाएँ । 'ल ! राम्रो लेखिछस्', गुरुको प्रतिक्रिया थियो ।
सोही दिन नेपाली अध्यापक दिउँसो साइकलमा हाम्रो घर आउनुभयो । मेरो सात्तो गयो । फेरि के आपत आइलाग्ने हो भन्ने डर लागेको थियो । आमा-बुबा घरै हुनुहुन्थ्यो । शिक्षक भर्‍याङ हुँदै बार्दलीतिर उक्लँदा गुरुसँग छलिन म भुइँ तलाको भान्छाकोठामा छिरेँ । बार्दलीको टेबुल कुर्सीमा गुरु, आमा र बुबा बस्नुभएको थियो । के रहेछ कुरा ? बार्दलीको ठयाक्कै मुनि उभिएर कौतुहल, जिज्ञासा र डरले चिन्ताग्रस्त हुँदै कान थापेँ । शिक्षकले बुबालाई भन्नुभयो, 'शम्भुजी, तपाईंको छोरो काम नलाग्ने भो भन्ठानेको थिएँ । कान्छोमा लेखनकला रहेछ । आज त्यसले स्कुलमा गजबको आलेख सुनायो ।'
त्यसपछि बुबाले भन्नुभएको थियो, 'हो र ! मैले त पत्याइनँ ।' शिक्षकले थप्नुभएको थियो, 'अहिले हाम्रै अगाडि त्यसलाई बोलाएर पढ्न लाउनुस् त ।' अकस्मात् अध्यापक र बुबाले मलाई माथि बोलाउनुभएको थियो । भुइँ तलामा कान थापेर उहाँहरूको वार्तालाप सुनिरहेको थिएँ । बिस्तारै बार्दलीमा उक्लेँ । केही थाहा नपाएजस्तो गरेँ । शिक्षकको आदेशमा आमा-बुबाको अगाडि मैले फेरि मेरो यात्रा संस्मरण 'धर्मस्थली घुम्दा' पढेर सुनाएँ ।
गुरुले मलाई भन्नुभयो, 'सानोबाबु, तँसँग लेखक हुने सम्भावना रै'छ । लेखिराख है !'
पढाइलेखाइबापत मैले चाल पाईकन मलाई उत्साह भर्ने, हौसला दिने र प्रेरित गर्ने गुरुको यो पहिलो वाक्य थियो । पाठ्यक्रमबाहेक अचेल लेखपढ र अनुसन्धान गर्न मन पराउने एउटा विद्यार्थीको हिसाबले यो पंक्तिकारलाई गुरुले दिनुभएको त्यो प्रेरणा र हौसला अहिले पनि कानमा बेलाबखत गुञ्जिरहेझैँ लाग्छ ।
के ढाँट्नु छ र ! केटौले उमेरमा गरिने उट्पयाङ र लापरबाहीको सीमा हुँदैन भन्थे । मेरो हकमा पनि त्यो कुरा दुरुस्तै लागू हुन्थ्याे । एसएलसी परीक्षाका लागि रजिस्ट्रेसन फर्म भर्ने बेला रहेछ । मलाई भनिएको पनि थियो । भकुण्डो खेल्ने र चकचक गर्ने धुनमा मैले फर्म भर्ने अन्तिम तिथिमिति बिर्सें । शिक्षक घरमा दुई/तीन पटक मलाई खोज्दै पुग्नुभएको थियो । तर, म भकुण्डो खेल्न साथीहरूसँग देहातको गाउँतिर गएको थिएँ ।
मेरो भकुण्डो खेल्ने साथीहरू खर्क आले, राजन काफ्ले, धनलाल ठोक्कर, ध्रुव कार्की, भीमबहादुर परियार, दिलबहादुर आले, शम्भु कुवँर, नेपाल कार्की (कान्छा), राजेन्द्र वन, काले विश्वकर्मा, विश्वनाथ साह, महेश कार्कीलगायत हुन्थ्याैँ । हामी कहिले कहाँ कहिले कहाँ गएर भकुण्डो खेल्थ्याैँ । पछि थाहा पाएँ । अध्यापकले शिक्षा कार्यालय गौरमा बुझाउनुपर्ने फर्मको हद म्याद दुई दिन गुजारेर मेरा लागि राख्नुभएको रहेछ । भकुण्डो खेलेर घर पुग्दा पिताश्रीको मायालु झापड पाँचै औंलाको डाम बस्नेगरी दुवै गलामा पर्‍याे । मजैले रन्थनिएँ । त्यसपछि फर्म भरेर शिक्षकलाई बुझाएको सम्झन्छु । यदि त्यो फर्म भर्ने अवसर नजुराइदिएको भए के हुन्थ्यो ? सायद जिन्दगीले अर्कै बाटो तय गर्थ्यो होला भन्ने कल्पनाले अहिले पनि अत्तालिन्छु ।
गाउँमा एकातिर चन्द्र ज्योति पुस्तकालय थियो, अर्कोतिर सूर्याेदय पुस्तकालय । चन्द्र ज्योति नेपाली कांग्रेसबाट सञ्चालित थियाे भने सूर्याेदय पुस्तकालय नेकपा मालेको तर्फबाट ।
आओ ! सम्झनाहरू हो ! आओ ! मैले लेखिसकेको छैन । शब्दहरूलाई थुपार्दै छु । लेख्नेले कि लेख्नै हुँदैन । लेखिसकेपछि ढाँट्नु हुँदैन । ती दिन ३० वर्षीय पञ्चायती कालरात्रिका काला दिन थिए । चेतनास्तरका हिसाबले चन्द्रनिगाहपुर पनि पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध गोलवद्ध हुँदै थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई केन्द्र ठानेर देशका अन्य भागमा झैँ मानिसहरू केन्द्रबाट दाहिने र देब्रेतिर उभिनेक्रम तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको थियो ।
चन्द्रनिगाहपुरका मानिसहरू केही पञ्चसमेत पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा थिए । बाँकी मानिसहरू एकातिर वामपन्थी (भूमिगत प्रतिबन्धित तत्कालीन नेकपा माले) र अर्कोतिर गैरवामपन्थी (प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस पार्टी) का समर्थक, शुभेच्छुक र कार्यकर्तामा विभक्त थिए । हुन त अन्य वामपन्थी दलहरू पनि अस्तित्वमा थिए तर तिनको उपस्थिति समाजमा त्यति सशक्त थिएन ।
कसरी बिर्सनु ! दर्शन र विचारअनुरूप गाउँमा गतिविधि चलायमान थिए । गाउँमा एकातिर चन्द्र ज्योति पुस्तकालय थियो, अर्कोतिर सूर्याेदय पुस्तकालय । चन्द्र ज्योति नेपाली कांग्रेसबाट सञ्चालित थियाे भने सूर्याेदय पुस्तकालय नेकपा मालेको तर्फबाट । पहिलेको गाउँ पञ्चायत भवनछेउमा रहेको सूर्याेदय पुस्तकालयको घुम्तीलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास पञ्च र कांग्रेस समर्थकहरूबाट भएको थियो ।
पुस्तकालयको घुम्तीलाई चन्द्रनिगाहपुरको दुर्गाचोकमा वामपन्थीहरूले नाटक र सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रस्तुति सकेको तीसको दशकको अन्तिम वर्षको कुनै रात ध्वस्त पार्ने धेयले लट्ठी, ढुंगामुढा हानेर छानोको खपडा पूरै खसालिएको थियो । यो मुद्दाले गाउॅंमा को ठीक र को बेठीक भन्ने राम्रै बहस चलेको थियो । त्यो विषय तत्कालीन प्रधान पञ्च जुद्धबहादुर रानाको पहलमा किनारा लगाइएको थियो ।
त्यसरी चन्द्रनिगाहपुरको समाज पनि विभक्त थियो । समाज विभक्त हुँदा आदरणीय नेपाली शिक्षक पनि केन्द्रको दाहिने उभिनुहुन्थ्यो । अध्यापकका आफ्ना विद्यार्थीहरूसँग उसले बोक्ने विचारका आधारमा भएका पूर्वाग्रही व्यवहारका अनेकौँ दृष्टान्त पनि नभएका होइनन् । धेरै साथीहरूले त्यस्ता कुरा मलाई सुनाएका थिए ।
मेरो बालसखाले राष्ट्रिय विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिताको दोस्रो पुरस्कार जितेको थियो । यो कुराले नेपाली शिक्षक त्यति प्रसन्न नभएको उसले उतिबेलै सुनाएको थियो । त्यो बालसखा एसएलसीमा अनुत्तीर्ण हुँदा अध्यापकले भनेको कुरा सुनाएको थियो । एसएलसीको परिणाम आएपछि गुरुले उसलाई सोध्नुभएको थियो, 'तेरो एसएलसी के भो ?' साथीको जवाफ थियो, 'मेरो एसएलसी बिग्रियो ।' त्यसपछि शिक्षकले साथीलाई सान्त्वना दिनु भएन । बरु अध्यापकले उसलाई भन्नुभएको थियो, 'सबै थोक तैँले कहाँ पाउँछस् त !'
जे होस, काम, क्रोध, माया, मोह, घृणा र द्वेषले नै मानिसलाई चलायमान बनाउँछ । त्यति भनेकै भरमा कुनै मानिसका बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु र लाञ्छित गर्नु मनासिब हुँदैन । गुरुको मानसिकता र व्यवहारमा विद्यार्थीअनुसार आग्रह-पूर्वाग्रहको मात्रात्मक प्रयोग सबैले अनुभव गर्थे । तर, मेरो सन्दर्भमा वामपन्थी विचार राख्ने मेरो दिवंगत बुबा र मसँग भने अपनत्वपूर्ण व्यवहार सदाबहार रह्यो ।
पढ्न काठमाडाैं गएपछि गुरुसँग चन्द्रनिगाहपुर गएको बेला मात्र भेट हुन्थ्यो । पढाइ सकेर पत्रकारितामा म अलिअलि बामे सर्न थालेको थिएँ । गुरुसँग भेट हुँदा एउटा शिष्यको तर्फबाट गर्ने आदर सम्मान सकेपछि गर्थें । उहाँले जहिल्यै सोध्नुहुन्थ्यो, 'के छ पत्रकार, तेरो खबर ?'
शिक्षकले त्यो प्रश्न सोध्दा प्रश्नभरि माया नै माया भरिएको अनुभूति हुन्थ्यो । चिसोयाममा म काठमाडाैंमा थिएँ । टेलिफोनमा मलाई साथीहरूले सुनाएका थिए, 'जाडोयाममा नेपाली शिक्षक जिल्ला शिक्षा कार्यालय गौरबाट फर्केर डुमरिया आइपुग्दा रक्तचाप बढ्यो । त्यसकै कारण उहाँलाई ब्रेन ह्यामरेज भयो । परिणामत: गुरु अल्पायुमै डुमरियामा २०५८ साल माघमा ५८ वर्षकै अनपेक्षित उमेरमा अकस्मात् गुरु बित्नुभयो ।'
नेपाली अध्यापक बित्नुभएको पनि १९ वर्ष भइसकेछ । यो धर्तीमा गुरु हुनु हुन्न । तर, गुरु हुनुभएको भए कति धेरै अन्तरंग कुरा गर्थें । कस्ता-कस्ता प्रश्न गर्थें होला भन्ने सधैँ लागिरहन्छ । मन त्यसै भारी भएर आउँछ । के गर्नु ? उफ ! एक असल नेपाली अध्यापकप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन ।
(लेखक चापागाईंको प्रकाशोन्मुख कृतिबाट साभार । सम्पादक)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २३, २०७७, ०८:१७:००